माओवादी ने’तृत्वको सरकार धरापमा पर्न लागे पछि प्रचण्ड तनाबमा ! भिडियो सहित:: Mero Desh
माओवादी ने’तृत्वको सरकार धरापमा पर्न लागे पछि प्रचण्ड तनाबमा ! भिडियो सहित
Published on: २३ चैत्र २०७७, सोमबार ०३:२७
क’र्णालीप्र’देश संसदीय दल बैठकले सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन भनेसँगै माओवादी ने’तृत्वको सरकार धरापमा परेको छ । एमालेले स’मर्थन फिर्ता लिएसँगै माओवादी अल्पमतमा पर्छ ।
संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही लाई मार्गप्र’शस्त गर्न अ’नुरोध गर्ने नि’र्णय आइतबार नै गरिसकेको छ ।
यस्तै संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आ’र्थिक मामिलामन्त्री प्र’काश ज्वाला, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल र प’र्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढालाई २४ घण्टाभित्र राजीनामा दिन भनिसकेको छ !भिडियो अन्तिममा राखिए को छ !
एमाले कर्णाली प्रदेशका प्र’मुख सचेतक गुलावजंग शाहले मन्त्रीहरूले सोमबारसम्म राजीनामा दिने प्र’तिबद्धता जना एको जानकारी दिए । यसैबीच, प्रदेश १ मा अ’विश्वास प्र’स्ताव फिर्ता हुने भएको छ । प्रदेश १ सभाको सोमबार बस्ने बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईवि’रुद्धको अ’विश्वास प्र’स्ताव फिर्ता लिइने भएको हो ।
प्र’स्तावका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार बस्ने प्र’देशसभा बैठक मा अ’विश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने बताएका छन् ! तत्कलीन नेकपा हुँदा राईवि’रुद्ध अ’विश्वास प्र’स्ताव ल्याइएको भए पनि सो पार्टी खारेज भएर एमाले–माओवादी बनेपछि प्र’स्ताव पनि अलपत्र परेको थियो ।
केही दिनअघि मात्रै एमालेका माधव नेपाल पक्षले ह’स्ता क्षर फिर्ता लिएसँगै माओवादी पनि पछि हटेको हो । अ’वि श्वास प्रस्तावमा ह’स्ताक्षर गरका बहुसंख्यक प्र’देशसभा सदस्यले ह’स्ताक्षर फिर्ता लिइसकेकाले अब यसको औ चित्य नभएकाले फिर्ता लिन लागिएको आङ्बोको भनाइ छ ।तत्कालीन नेकपाका ३७ जना प्र’देशसभा सदस्यको ह’स्ता क्षरसहित आङ्बोले मुख्यमन्त्री राईवि’रुद्ध प्र’देश सभा सचिवालयमा पुस १२ मा अ’विश्वास प्र’स्ताव दर्ता गराएका थिए ।ratopati !